एनआरएनए आइसीसीको कार्यविधिले एनसीसीलाई अस्तित्व विहीन बनाउँछ - Durbin Nepal News
एनआरएनए आइसीसीको कार्यविधिले एनसीसीलाई अस्तित्व विहीन बनाउँछ
पशुपति पाण्डे १२ आश्विन २०७६, आईतवार १९:४३
विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेपनि हामी सबै नेपालीमा देश प्रतिको आघाद माया र अटुट सम्बन्ध छ । यसलाई अझ बढी प्रगाढ बनाउन सम्पर्कको डोरीलाई मजबुत बनाउने काम गैर आवासीय नेपाली सङ्घले गर्दै आएको छ । संस्थाको नेतृत्व चयन तथा संस्थाले गर्ने कार्यहरूमा आम नेपालीको चासोको विषय हुनु स्वाभाविकै हो । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को हरेक दुई वर्षमा हुने अधिवेशन र नयाँ नेतृत्व चयनको सँघारमा छौ अहिले हामी । यस बेला सबैको ध्यान तानिनु स्वाभाविकै हो । संस्थाको उद्देश्य र लक्षलाई सफलीभूत बनाउन राम्रो नेतृत्व चयन गर्न सकिएको खण्डमा यसले अपेक्षित गति लिन सक्दछ ।
हटकेकको रूपमा रहेको यही विषय र केन्द्रबिन्दुमा उभिएर हामीले केही विषय बस्तुलाई पर्गेल्नु पर्ने देखिन्छ ।
आइसीसीमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्न विभिन्न देशहरूबाट जाने प्रतिनिधि छनौट अहिले सबैको चासो र तानातानको विषय हो । प्रतिनिधि चयनमा आइसीसीले मापदण्ड बनाएको छ । के यो मापदण्ड ठिक छ ? एनसीसी तथा आइसीसीले बनाएको कार्यविधि ठिक छ ? प्रश्न उठ्छ । यी दुई प्रश्न वरिपरि तातो बहस भइरहेको छ ।
आइसीसीले पठाएको प्रतिनिधि चयन मापदण्ड १० वर्ष अगाडि ठिक थियो होला । तर अहिले त्यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै आधार छैन । संस्था गतिशील हुन्छ । समय सापेक्ष ढङ्गले नीति नियम परिवर्तन गर्दै जानु पर्छ । गाइडलाइन आइसीसी बोर्डको साझा भावनामा नै तयार भए पनि समय सापेक्ष देखिँदैन । यसमा पुन बहस गरी समय सापेक्ष बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । सदस्यहरूको भूमिका, निरन्तरता र सक्रियता जस्ता सबै पक्षलाई बुझेर मात्र प्रतिनिधि चयन हुनु पर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ । अर्को सर्वमान्य परिभाषा भनेको निर्वाचित कार्यसमितिले प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि चयन गर्न सक्छ ।
यसको एउटै अर्थ हो नेतृत्व देखि साधारण सदस्य सम्मको सहभागिता । एनसीसीहरुलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने परिपाटीलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । कुनै पनि संस्थालाई माथिबाट हस्तक्षेप भन्दा आन्तरिक रूपमा सबल र शक्तिशाली बनाइनु पर्दछ । सबैलाई सहभागिताको ढोका खोल्नु पर्दछ ।
अहिले आइसीसीले प्रतिनिधि चयन मापदण्ड अनुरूप काम गर्न भनेको छ । जसमा आइसीसी टाक्सफोर्समा राखिएका व्यक्तिलाई समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ । टाक्सफोर्समा को छन् र किन जिम्मेवारी दिइयो भन्ने सम्बन्धित देशका एनसीसीहरुलाई जानकारी दिइएको छैन । टाक्सफोर्स प्रतिनिधि चयनका लागि मात्र बनाएको जस्तो देखिन्छ । केन्द्रले आफ्ना प्रतिनिधि आफै चुन्ने र आफ्नै खटन पटन र अनुकूलमा राखिराख्ने केन्द्रीकृत मोडल प्रयोग गर्न खोजेको त हैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
एनआरएनए अमेरिकाबाट गाइडलाइनमा पर्ने प्रतिनिधिको सङ्ख्या २०० भन्दा बढी हुन जान्छ । जबकि १६८ जना छनौट गर्नु पर्ने हुन्छ । यतीसम्म की वर्तमान कार्यसमितिका सल्लाहकार, निवर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी, च्याप्टरको कार्यसमितिमा बसेर काम गरिरहेका पदाधिकारी सदस्य कसैलाई पनि प्रतिनिधि बनाउन नमिल्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । यसले एनआरएनएको अभियानमा लागिरहेका धेरैलाई अलग गर्दै संस्थालाई नै निकम्मा बनाउँछ ।
१५ वर्षको अवधिमा ८० देशमा पुगेको एनआरएनएले अधिकार केन्द्रीकृत गर्दै एनसीसीहरुलाई निकम्मा बनाउने हो भने कदापि बलियो हुनसक्दैन । सम्पूर्ण अधिकार एनसीसीलाई प्रत्यायोजन गर्दै प्रजातान्त्रिक र सहभागी मूलक बनाइनु पर्दछ । यी कुरामा आगामी विश्व सम्मेलनमा छलफल गरी सही बाटो पहिलाउन सक्नु पर्दछ ।
पहिलो प्राथमिकता एनआरएनए आइसीसीको निर्वाचन प्रक्रियालाई अनलाइन सिस्टममा लानु पर्दछ । हरेक हिसाबले एनआरएनएमा जोडिएका तर विविध कारणले सम्मेलनमा नेपाल पुग्न नसक्नेले पनि अनलाइनबाट निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन सकुन् भन्ने उदारता देखाउनु पर्छ ।
दोस्रो प्राथमिकतामा एनसीसीमा नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचनको समयमा नै प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिन्छ । सानो सङ्ख्यामा मात्र योगदान पुर्‍याएकाहरूलाई प्रतिनिधिमा मनोनीत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु अर्को राम्रो अभ्यास हुनसक्छ ।
तेस्रो प्राथमिकता भनेको अधिवेशनको समयमा नेपाल जाने सबै एनआरएनए सदस्यले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ । तर यो विधि अवलम्बन गर्दा व्यवस्थापन पक्षलाई ब्यबस्थापनमा केही गारो र खर्चिलो हुने देखिन्छ ।
आइसीसीको विद्यमान कार्यविधिले एनसीसीलाई अस्तित्व विहीन बनाउँछ । एनसीसीलाई थाहै नदिई बनाउने कमिटी र टाक्सफोर्सबाट जाने व्यक्ति नेतृत्वमा जाने व्यक्तिहरू प्रति बढी उत्तरदायी हुने भएकाले निर्वाचनमा असर पार्दछ । यसरी आउने नेतृत्व कदापि बलियो हुनसक्दैन । अन्ततः यसले आइसीसीलाई थप कमजोर बनाऊ छ । आगामी वर्षहरूमा हुने विश्व सम्मेलनमा एनआरएनएमा पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।
(पाण्डे एनआरएनए अमेरिकाका महासचिव हुनुहुन्छ ।)
१२ आश्विन २०७६, आईतवार १९:४३ मा प्रकाशित